नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० सुरु, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० सुरु
पोखरा । गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखराबाट शनिबार नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० उद्घाटन गरिएको छ। शनिबार साँझ आयोजित एक समारोहबीच गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङले भ्रमण वर्ष औपचारिक उद्घाटन गरे।
महत्वाकांक्षी २० लाख विदेशी पर्यटक भित्राउने लक्ष्यसहित सो भ्रमण वर्ष सुरु भएको हो। नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार सन् २०१७ मा १० लाख र २०१८ मा ११ लाख ७३ हजार विदेशी पर्यटक भित्राएको तथ्यांक छ।
यसअघि नेपालमा सन् १९९८ मा भिजिट नेपाल–१९९८, नेपाल पर्यटन वर्ष २०११ मनाइएको छ। १९९८ मा ५ लाख र सन् २०११ मा १० लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्य थियो।
कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री गुरुङले नेपाल भ्रमण वर्ष सफल पार्न सबै क्षेत्रबाट सहयोग हुनुपर्ने बताए। उनले प्राकृतिक र सांस्कृतिक रुपमा धनी पोखरालाई स्वर्गजस्तो शहर बनाउन जरुरी भएको पनि उल्लेख गरे।
गण्डकी प्रदेशको समृद्धिको आधार पर्यटनलाई मानेर प्रदेश सरकारले आफ्ना गतिविधि अगाडि बढाइरहेको पनि उनले सो अवसरमा स्मरण गराए। पोखरामा एक हजारभन्दा बढी जना अट्न सक्ने ठूलो क्षमताको सभाकक्ष आबश्यकता भएको भन्दै उनले पोखरा क्षेत्रमा धेरै शैया भएको ठूलो अस्पतालको समेत जरुरत परेको भनाइ राखे।
फेवातालको संरक्षणको लागि १० करोड रुपैयाँँ प्रदेश सरकारले छुट्याएको भन्दै उनले २ वर्षभित्र पोखरामा नयाँ विमानस्थल निर्माण कार्य सकिने र त्यसले प्रदेशको समृद्धिमा बल पुर्याउने बताए।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले पर्यटकको बसाइँ लम्बाउने गरी आवश्यक पर्यटकीय पूर्वाधारमा निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बताए। उनले सडक तथा हवाई यातायातमा सुविधा थप गरिने भन्दै ३ तहको सरकार मिल्यो भने २० लाख पर्यटक भित्राउन गाह्रो नभएको बताए।
नेपाल पर्यटन वर्ष २०११ का संयोजक सुरेन्द्र शाक्यले राजीतिक अस्थिरताबीच सो समयमा ५ लाख पर्यटक भित्राएको स्मरण गरे। उनले हाल राजनीतिक समस्या समाधान भएकोले लक्ष्य प्राप्तिमा गर्न सफल भइने बताए। उनले नेपाल घुम्ने पर्यटकबाट के लिने भन्दा के दिने भन्नेतर्फ सोच्नुपर्नेमा जोड दिए।
नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० संयोजक सुरज बैद्यले काठमाडौं विमानस्थललाई दसैँसम्म सुधार गरिने जानकारी दिए। कार्यक्रममा संघीय सांसद दीव्यमणि भण्डारी, पवित्रा खनाल निरौलालगायतले बोलेका थिए।
नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० का राष्ट्रिय कार्यसम्पादन समिति सदस्य विप्लव पौडेलले अघिल्लो वर्ष ११ लाख बढी पर्यटक आएकोमा यो संख्या दोब्बर पार्ने लक्ष्यसहित सरकारले पर्यटन वर्ष मनाउन थालेको बताए।
नेपाल भ्रमण वर्ष सफल बनाउन चालु आर्थिक वर्षको बाँकी ३ महिना (वैशाख–असार)का लागि अहिले खर्च गर्न मिल्ने गरी १० करोड रुपैयाँ पनि सरकारले दिएको छ। यो रकमले तीन महिना अवधिमा प्रवद्र्धनका कामदेखि केही पूर्वाधार बनाउन सुरु हुनेछ।
‘१० करोड रुपैयाँले सिंगो अभियानलाई पुग्ने होइन। तर, अहिलेका लागि यो रकम सरकारले दिएको हो। बाँकी रकम आगामी आर्थिक वर्षमा विनियोजन हुनेछ,’ पौडेलले भने, ‘प्रारम्भिक काम यो रकमबाट सुरु हुनेछ।’
पर्यटनमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई नेपाल भित्राउन सम्मेलन गर्ने तयारी पनि गरिएको छ। त्यस्तै भारतका विभिन्न सहरमा माइस टुरिजमका लागि प्रवद्र्धनका कार्यक्रम पनि गर्ने तयारी भइरहेको छ।
त्यसबाहेक नेपाल पर्यटन बोर्डले पनि प्रवद्र्धनको अभियान चलाएको र त्यसमा सहकार्य गर्ने योजना रहेको बताइन्छ। नेपालमा भित्रिने पर्यटकलाई आवश्यक जानकारी दिन नेपाल र भारतका सिमा नाकासहित सातवटा ठाउँमा ‘नमस्ते सेन्टर’ बनाउने तयारी छ।
पोखरासहित काकरभिट्टा, जनकपुर, बिराटनगर, भैरहवालगायत ठाउँमा पर्यटकलाई स्वागत सत्कार गर्न मिल्ने गरी नमस्ते सेन्टर बन्नेछन्। एउटा सेन्टर बनाउन कम्तीमा ५० लाख रुपैयाँ खर्च लाग्नेछ। ती सेन्टरको व्यवस्थापन स्थानीय सरकारमार्फत गरिने जनाइएको छ।